Joke inoenda hutachiona uye inoita kuti vashandisi ve iPhone 7 vaparadze nharembozha | IPhone nhau
Joke inoenda hutachiona uye inoita kuti vashandisi ve iPhone 7 vaparadze nharembozha yavo vachitsvaga 3.5mm port
Vazhinji vashandisi vatinoverenga nezvavo nezve tekinoroji vane kana kupedzisira vaine imwe nhanho yezivo nezvazvo. Asi izvi hazvisizvo mune zvese zviitiko. Ini ndinofunga zvaive nekuburitswa kweIOS 7, joke iyo iyo nyowani sisitimu yakapa kushorwa kwemvura kwakonzera vazhinji vashandisi kuisa yavo iPhone mumvura, iyo yakapera sezvaunogona kufungidzira. Gore rino, a prank vhidhiyo pamusoro peyakavanzika 3.5mm chiteshi chakakonzera vashandisi vazhinji kupwanya yavo iPhone 7.
Icho hachisi chakavanzika kuti imwe yemakakatanwa mapoinzi - kana asiri iwo akanyanya - yeavo vakauya neiyo iPhone 7 kusavapo kweiyo headphone port, iri yevamwe vashandisi mutambo unoita kunge hupenyu nerufu. Zvinotaridza kuti vashandisi ava vashaya iyo 3.5mm headphone chiteshi avo vakacherekedza vhidhiyo yakatumirwa paYouTube chiteshi che TechRax... pasina kumira kuti ufunge kuti chingangove chinosekesa.
Kutsvaga iyo iPhone 3.5's 7mm chiteshi cheichi prank
Iyo vhidhiyo dzidziso iri nyore kwazvo: Apple yaisanganisira chiteshi icho, asi chakavanzika. Iyo dzidziso inotanga nemushandisi kuisa yavo iPhone 7 pane tsigiro yakachengetedzwa-zvakanaka, panguva iyoyo isu tatova neyekutanga "inosetsa" poindi (iyo isingazoseka kune vanokanganisa vashandisi): kana wakabata iyo iPhone skrini zvine simba, Tinoona iyo Springboard inofamba, panguva iyo munyori wevhidhiyo anoti icho chinhu chakasarudzika uye kuti chiratidzo chekuti tiri munzira chaiyo. Pashure chaipo, zvinotanga kuboora bevel uko chiteshi chefoni yepamusoro chinofanirwa kunge chiri, asi kwete usati wadimbura vhidhiyo kaviri, zvinoreva kuti aluminium yakasimba.
Iine gomba ratogadzirwa isu tine chimwe chezvinhu zvinonakidza zvevhidhiyo: TechRax inoisa mamwe maEarPod kubva kune apfuura uye otanga kuridza mimhanzi, asi inobuda iine vhoriyamu yakakwira chaizvo izvo zvinogona kungoreva kuti ndizvo kubuda mumutauri iyo iPhone kwete mahedhifoni.
Kana iwe ukaverenga chinyorwa ichi sechinhu chinosekesa, kuseka kwacho kwaisazove kuzere usina kuverenga zvimwe zve makomendi akatumirwa paYouTube. Iyo yapfuura inoti «Ndakamuboora gomba iye. Iyo headset haina kukwana zvakakwana. Ini ndinofanira kuboora zvakadzika? Zvakare, foni yangu yakadzimwa nekuti yakanga isina bhatiri ini ndinofunga. Ndiri kuchaja kweawa imwe uye haina kubatidza. Izvi zvakajairika here?".
Chero zvazvingaitika, kana mushandisi ari kutiverengera ari kufunga nezve kutsvaga chiteshi chefoni, kwete, kana Apple kana imwe kambani pasi rose yaizoviga chimwe chinhu pane chimwe chishandiso chavo chaida chibooreso kuunza pachiedza. Unonyeverwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Joke inoenda hutachiona uye inoita kuti vashandisi ve iPhone 7 vaparadze nharembozha yavo vachitsvaga 3.5mm port
Unofanirwa kunge uri benzi kumedza zvinhu izvi amai vangu
Kune vese avo vakaita izvozvo, ndinokukoka iwe kuti undipe iPhone, kunyanya 128gb ... zviri pachena kuti vane mari yakawanda uye vanoshaya imwe oxygen kumusoro uko ...
Idzi inhema. Hapana munhu akakumikidzwa mukugadzira maburi mune yako nhare mbozha, kunze kwekurekodha benzi vhidhiyo. Chii chinoitika ndechekuti kana mumwe munhu akatsikisa chimwe chinhu painternet chinova chokwadi uye handizvo.
Iwo makomendi ese trolls murume !! Ivo vanozvinyora kuti vape yakawanda bolus kune joke uye yakawanda virality! Ngatione kana tichirega kuva vanonyengera havo haha
Tronchante. Mazuva ese mamwe mapenzi!
Kuwedzeredza kwetariro kana chokwadi? Apple inokumbira zvimwe zvinhu zveiyo iPhone 7
Apple inodonha kubva kuIsrael inonongedzera ku iPhone 8 muna 2017